साथीहरूको दबाबको कसरी प्रतिरोध गर्न सक्छु?
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अट्टी अफ्रिकान्स अबुइ अब्खाज अब्बे अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अलुर अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस आएमारा आर्मेनियन आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इबानाग इबिन्डा इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एडो एफिक एस्टोनियन ओक्पे ओटेटेला ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काचिन काजाक काबाइली काबुभरदियानु किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किपेन्डे किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (पास्टाजा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) केक्ची कोंकनी (रोमन) कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्रियन क्याटालान क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा खाना गा गाउरानी गारीफुना गालिसियन गुएरे गुजराती गून गोकाना ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चुभास चेक चोपी चोल चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टान्ड्रयो टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन टोराजा डच डाँग्मे डायाक ङाजु डिगोर डेनिश ड्रेहु ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई दामारा नजेमा नर्वेली नाइजेरियन पिजिन नाभाहो नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस नेपाली नोंगा न्दौ न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पलाअन पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पिजिन (क्यामरून) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोनापियन पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बम्बारा बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाटाक (सिमालुङ्गुन) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बास्क बिकोल बियाक बिसाउ गिनियन क्रिओल बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल बोउलो बोलिभियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिजो मिहे मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन याकुबा युक्रेनियन योरूबा रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोतुमन रोमानियन रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लेन्जे लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सङ्गीर सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिनाम्वांगा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
आफ्नो लागि आफै निर्णय गर्दा तपाईं अरूको इशारामा नाचिरहनुभएको हुँदैन।
कल्पना गर्नुहोस्: स्कुलको दुई जना साथीहरू विनोदतिर आउँदैछन्‌। विनोदको धड्‌कन तेज हुन थाल्छ। यही हप्ताको कुरा हो, तिनीहरूले विनोदलाई दुई चोटि चुरोट खान दबाब दिइसके। आज पनि तिनीहरू त्यसै गर्दै छन्‌।
एउटा केटाले भन्छ:
“एक्लै? आऊ म एउटा साथी चिनाइदिन्छु।”
तिनले “साथी” भन्दा आँखा झिम्काउँदै खल्तीबाट केही कुरा निकालेर विनोदतिर आफ्नो हात लम्काउँछ।
त्यो केटाको हातमा चुरोट पो रहेछ। अब विनोदको धड्‌कन झन्‌ तेज हुन थाल्छ।
विनोदले जवाफ दिन्छ, “म चुरोट खाँदिन भनेर पहिल्यै भनिसकें!”
अर्को केटोले भन्न थाल्छ: “कत्ति डराएको?”
विनोदले साहस बटुल्दै भन्छ, “डराएको होइन।”
त्यो केटोले विनोदको काँधमा हात हालेर भन्छ, “लिऊ न लिऊ।”
पहिलो केटो विनोदको नजिक गएर चुरोट दिंदै खुसुक्क भन्छ: “कसैले थाह पाउँदैन। हामी कसैलाई भन्दैनौं के!”
तपाईं विनोद हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो?
ती साथीहरूले के गर्दै छन्‌ भनेर तिनीहरूलाई थाह छ? तिनीहरू आफ्नो लागि आफै निर्णय गर्ने मानिसहरू हुन्‌ त? पक्कै होइन। तिनीहरू अरूको लहैलहैमा लाग्नेहरू हुन्‌। अरूले आफूलाई मन पराओस् भन्ने चाहेकोले तिनीहरू अरूको इशारामा नाच्छन्‌।
तपाईं पनि यस्तै अवस्थामा पर्नुभयो भने कसरी त्यसको सामना गर्न सक्नुहुन्छ? साथीहरूको दबाबको प्रतिरोध कसरी गर्न सक्नुहुन्छ?
१ पहिल्यै विचार गर्नुहोस्
बाइबल भन्छ: “चतुर मानिस दुःख आएको देखेर जोगिन्छ, तर सीधा-साधा त्यसमा पर्छ र दण्ड भोग्छ।”—हितोपदेश २२:३.
समस्या आउनुअघि नै तपाईंले त्यसबारे थाह पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै, स्कुलका साथीहरूले चुरोट खाँदै गरेको तपाईंले टाढैबाट देख्नुभयो भने आफूमाथि कस्तो समस्या आउँदै छ भनेर विचार गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने समस्याको सामना गर्न तपाईं तयार भइरहेको हुनेछ।
बाइबल भन्छ: “आफ्नो अन्तस्करण सफा राख।”—१ पत्रुस ३:१६.
आफैलाई यस्तो प्रश्न सोध्नुहोस्, ‘भीडको पछि लागिरहें भने के म साँच्चै खुसी हुन्छु?’ हुन त केही क्षणको लागि साथीहरूले मन पराएको महसुस गर्नुहुन्छ होला। तर पछि तपाईंलाई कस्तो महसुस हुन्छ? कक्षाका साथीहरूलाई खुसी बनाउन के तपाईं आफ्नो पहिचान गुमाउन चाहनुहुन्छ?—प्रस्थान २३:२.
३ निर्णय गर्नुहोस्
बाइबल भन्छ: “बुद्धिमान्‌ मानिस होसियार हुन्छ।”—हितोपदेश १४:१६.
ढिला होस् या चाँडो हामीले निर्णयहरू गर्नै पर्छ। अनि त्यसको नतिजा पनि भोग्नै पर्छ। बाइबलमा यूसुफ, अय्यूब र येशूजस्ता मानिसहरूबारे बताइएको छ जसले सही निर्णय गरे। साथै गलत निर्णय गर्नेहरू, जस्तै: कयिन, एसाव र यहूदाजस्ता व्यक्तिहरूबारे पनि बताइएको छ। तपाईंचाहिं कस्तो निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ?
बाइबल भन्छ: “सत्यताको पछि लाग्।” (भजन ३७:३) आफूले गरेको निर्णयले कस्ता नतिजाहरू ल्याउँछ भनेर पहिल्यै सोच्नुभयो भने आफ्नो अडानबारे बताउन सजिलो हुन्छ र यो इनामदायी पनि हुन्छ।
चिन्ता नगर्नुहोस्! तपाईंले साथीहरूलाई भाषण दिनुपर्दैन। निर्धक्क भएर नाइँ मात्र भने पुग्छ। अथवा आफ्नो अडानबारे स्पष्टसित बताउन यसो भन्न सक्नुहुन्छ:
“मलाई चाहिं सामेल नगर है!”
“म यस्तो कुरा गर्दिनँ!”
“मलाई अझै चिनेको छैनौ?”
मुख्य कुरा भनेको निर्धक्क भएर तुरुन्तै जवाफ दिनु हो। यसो गर्दा साथीहरूले तपाईंलाई दबाब दिने छैनन्‌।
अरूले खिल्ली उडाउँदा के गर्ने?
साथीहरूले दबाब दिंदा तपाईंले हार मान्नुभयो भने तपाईं तिनीहरूले नियन्त्रण गर्ने रोबटजस्तै हुनुहुनेछ
साथीहरूले तपाईंको खिल्ली उडायो भने के गर्नुहुन्छ? उनीहरूले तपाईंलाई डरपोक भनेर जिस्क्यायो भने नि? खिल्ली उडाउनु वा जिस्क्याउनु पनि एक प्रकारको दबाब हो। तपाईं यसको सामना कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईंसित दुई वटा उपाय छन्‌।
सहनुहोस्। (तपाईं यसो भन्न सक्नुहुन्छ, “हो, मलाई डर लाग्छ।” अनि डराउनुको कारण पनि बताउन सक्नुहुन्छ।)
तिनीहरूलाई नै दबाब दिनुहोस्। तिनीहरूको कुरा नमान्नुको कारण बताउनुहोस् अनि तिनीहरूको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनुहोस्। (“तिमीजस्तो स्मार्ट मान्छेले पनि चुरोट खान्छौ भनेर सोचेकै थिइनँ!”)
तपाईंका साथीहरूले दबाब दिइरहन्छन्‌ भने त्यहाँबाट अन्तै जानुहोस्! नबिर्सनुहोस्, जति लामो समय त्यहाँ बस्नुहुन्छ त्यति नै दबाब बढ्‌दै जान्छ। त्यो ठाउँ छोडेर जानुभयो भने तपाईं आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्नुहुन्न भनेर साथीहरूले देख्नेछन्‌।
साथीहरूबाट पक्कै दबाब आउँछ। तर हार मान्ने कि दृढ रहने, निर्णय तपाईं कै हो। आखिरमा छनौट तपाईंले नै गर्नुपर्छ।—यहोशू २४:१५.
साथीहरूको दबाबको प्रतिरोध गर्न आफूलाई कसरी तयार पार्न सक्छु?
साथीहरूले गलत काम गर्न दबाब दिए भने म के गर्छ?
www.jw.org/ne मा साथीहरूको दबाबको प्रतिरोध गर्नुहोस्! भन्ने ह्वाइटबोर्ड एनिमेसन हेर्नुहोस्। (बाइबलको शिक्षा > किशोरकिशोरी अन्तर्गत हेर्नुहोस्)
साथीहरूको दबाबको प्रतिरोध गर्नुहोस्!